Ciidamada Tarafikada Hargeysa oo Caawa rasaas ku hakinaya Gadidka Dadka rayidka ah – SBC
Ciidamada Tarafikada Hargeysa oo Caawa rasaas ku hakinaya Gadidka Dadka rayidka ah
Posted by editor on Apriil 23, 2011 Comments
Hargeysa- Wararka ka imaanaya Magaalada Hargeysa ee Maamulka la magacbaxay Somaliland ayaa ku waramaya in Caawa Magaaladaasi lagu arkayo Ciidamo Farabadan oo hub sida gaar ahaana ciidamada wadooyinka ee loo yaqaano Tarfikada
Ciidamadan ayaa caawa waxay baaritaan aan horey looga baran Gudaha Magaaladaasi waxay ku sameynayaa Gadiidka Dadka Rayidka ay wataan ee Dhexmaraya Gudaha Magaalada Hargeysa.
Dad xog ogaal ah oo ay la xiriirtay warbaahinta SBC ayaa waxay sheegeen in wadooyinka Magaalada ay Mashquul yihiin Dhawaqa rasaasta ka dhacda Qoryaha fudud ayaa laga maqlayaa gudaha magaalada mana cada ilaa iyo Iminka sababta dhalisay howlgalkan.
Dadka ku dhaqan Gudaha Magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay la yaaban yihiin Howlgalkan & rasaastan caawa laga sida weyn looga Maqlayo Gudaha Magaalada Hargeysa taasi oo ay ridayaan ciidamada wadooyinka oo aan horey hub u qaadan jirin waxaana dadbadan ay bilaabeen inay xiraan Goobohooda Ganacsiga iyaga oo ka cabsi qaba in ay jiiraan gadiidka qaar oo ciidamada ka cararaya.
Dhinaca Kale gadiidka qaar ayaa ka dhago adeygaya amarka ciidamada kuwaasi oo ciidamaduna ay ku ridayaan rasaas gudaha magaalada oo ay dad badan dhexmarayaan.
Howlgalkan ayaa dadka qaarkii u arkaan mid lagu xoojinayo Amaanka guud ee Magaalada kadib markii dhawaan ciidamada Booliiska ee Magaaladaasi ay ka digeen in howlgalo qarax lagu geysto Gadiid ay leeyihiin UN-ka oo Taarikada laga jaray.
Wixii ku soo kordha kala soco SBC International